WARBIXIN:- Bariiska bacda ka sameysan iyo waxyaabaha ay Soomaalida ka aaminsan yihiin – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
WARBIXIN:- Bariiska bacda ka sameysan iyo waxyaabaha ay Soomaalida ka aaminsan yihiin
Waxaa muddo badan jirey oo dad badan oo dunida daafaheeda degan cabsi galiyey qoraalo, sawiro iyo duubis la isla dhex-maraayey oo ku saabsan bariis bac laga sameeyey (Plastic Rice) oo laga keenay dalka Shiinaha, kaas oo ay bulshadeena Soomaaliyeed maalmahaan dambe ay fariinteedu aad usoo gaareysay.
Dadka Soomaalida ayaa arrintaasi maalmihii ugu dambeysay si aad u hadal haysay, maadaama aan nahay bulsho aad u isticmaasha bariiska, balse waxaa muhiim ah inaan arrinkaas ka sal gaarno oo aynaan iska rumeyn warbaahinta oo inta badan been iyo runba la isla dhex maro.
Marka hore inta aanan u gudbin “Bariis Bac” ka sameysan (Plastic Rice), waxaan jeclaa inaan tilmaamo inuu jiro “Bariis Bug” (Fake Rice), waxaana bariiskaasi bugta ah laga sameeyaa bariiska jajaban ama miro kale sida galeyda.
Bariiskaasi waxaa dib isugu dhadhajiya oo mid caadi ah u ekaysiiya makiinado loogu talo galey, macmiisha gadatana waa ogyihiin oo dalalka qaar magacyo u gooni ah ayaa loogu yeeraa, sida Waqooyiga Kuuriya oo loo yaqaan Okssal iyo Gangnagssal. Wadamo kale oo bariga fog ah ayaa isticmaala, gaar ahaan dadka aan awoodin bariiska caadiga ah.
Waxaa muhiim ah inaan is-weydiino su’aalahan. Yaa lagu eedaynayaa iney sameeyaan bariiskan? Mase la awoodaa in la sameeyo bariis bac ah oo ka raqiisan kan saxda ah?
Bariiskaan waxaa lagu eedaayaa in dalka Shiinaha lagu sameeyo, maadaama uu bariisku yahay cunada asaasiga ah ee Shiinaha lama ogola iney bariis dhoofiyaan, laakiin waayadan dambe ayaa shirkadaha Shiinaha waxey bilaabeen iney dhoofiyaan bariis, waxaana u saamaxey talaabadaas cusub iney marka hore iibsadaaan.
Sanadkii tagey ee 2016ka dalka Shiinuhu wuxuu ahaa kaalinta 1-aad marka la eego soo iibsashada bariiska, waxaana ay ahaayeen kaalinta 8-aad marka la eego sii iib-geynta (Export).
Su’aasha ah in la awoodo bariis bac ah oo kan dhabta ah ka raqiisan ayaa jawaabteedu waxay tahay “MAYA”.
Tusaale ahaan, hadii bac makiinad la galiyo oo bariis loo ekeysiiyo, marka aad kariso waa dareemi kartaa, oo karinta ayeyba is qab-qabsanayaan, karinta kahorna wey heehaabayaan biyaha dushooda, sidoo kale hadii waxyaalo kale lagu daro oo aad loo hor mariyana, qiimaha ayaa ka sara maraya bariiska caadiga ah.
Hadal haynta bariiska bacda ah waxaa 21-ka bisha Dec 2016-ka beentii ugu weynayd ka baahiyey BBC da, waxayna BBC-du sheegtay in 2.5 ton bariis bac ka sameeysan laga soo dhoofiyey Shiinaha oo ay dowlada Nigeria qabatey.
Wariyahooda Martin Patience oo ka war-bixinayey ayaa yiri “Bariis caadi ah ma aha, markaan sacabka ku qaadey oo sanka la aadey wuxuu u urayey kiimiko”.
Dowlada Nigeria ayaa baaritaano aad u dheer ugu dhaqaaqdey bariiskii, laakiin markii dambe bariis caadi ah ayuu noqdey, oo ma uusan ahayn bac iyo kiimiko toona, BBC-duna kama aysan noqon beentii ay baahisey.
Dhinaca kale, waxaa jira inaan aragno makiinado baco u badalaya cadad yar yar oo qaab bariis leh iyo dad bariis karsan inta gacanta ku cadaadiya meel ku dhufta oo aad aragto inuusan kala daadaneyn, hadaba labada arrin waa kala meel waana kala dad, balse fahamkeena ayaa isku keenaya.
Ugu dambeyntii, hadaba waxaan leeyahay bulshadeyda Soomaaliyeed shakigu waa jiree aynu arrinkaas dib u eegno, aniga baaritaan aan sameeyey waxaan kusoo gaba-gabeynayaa inaanun bariis bac oo laga ganacsan karo uusan jirin waqtiga la joogo, wixii soo kordha waan soo tabin Insha Allah.
Cali Baashi Maxamuud
Afeef:- Aragtidda maqaalada iyo faallooyinka waa kuwo u gaar ah qoraayaasha ku saxiixan, kamana tarjumeeyso warbaahinta Bulshoweyn.